Phantom Tetra emnyama | Ngeentlanzi
Intlanzi Phantom Tetra emnyama, Basuka kwilizwekazi lase Mzantsi Melika, kanye kwimimandla ephezulu yeParaguay. Ezi ntlanzi zincinci ziyintsapho ye-characid kwaye zaziwa ngegama labo lenzululwazi iHyphessobrycon megalopterus.
Ngokubanzi ezi ntlanzi zizolile kwaye zinoxolo, zihlala kuzo shoalKe ngoko, kufuneka zigcinwe zigcinwe kumaqela ubuncinci beesampulu ezi-6. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iintlanzi ezingamadoda zilwa ngokukhohlisa, zisukelana rhoqo, kodwa ngaphandle kokubangela naluphi na uhlobo lweengxaki okanye umonakalo omkhulu.
Iintlanzi ze-Phantom Tetra zinokulinganisa ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezi-7 kwindawo yazo yendalo, kodwa zifikelela kancinci kwiisentimitha ezi-4 ekuthinjweni. Kwangokunjalo, umzimba wayo wohlulwe waba ziindawo ezimbini apho ukwahlula le mibala ilandelayo: ngasemva zijet ezimnyama, ngeli lixa zingaphambili, zinemivalo emi nkqo yeetoni ezimbini ezahlukeneyo, enye imnyama enye. isilivere. Kwelinye icala, Amaphiko ayabonakala, Ngaphandle kwempiko yasemva engwevu.
Ukuba ucinga unayo le ntlanzi kwi-aquarium yakhoKubalulekile ukuba uyikhumbule into yokuba kuyacetyiswa ukuba ne-aquarium eneeelitha ezingama-60, enezityalo ezininzi ezidadayo ezinciphisa ukukhanya. Ngendlela efanayo, iimeko ezifanelekileyo zokugcina olu hlobo lweentlanzi ziya kuba zezi zilandelayo: iqondo lobushushu kufuneka libe yindawo yetropiki, ke amanzi kufuneka abephakathi kwama-23 nama-28 degrees celcius, i-pH yamanzi kufuneka ibe phakathi ko-6 no-7,5, 12 ngelixa ubunzima kufuneka bube ngaphezulu kwe-XNUMX.
Gcina ukhumbula ukuba ukuzala kwakhona kwezi zilwanyana kunzima kakhulu, kodwa kunokwenzeka, ubuncinci iilitha ezingama-50 zamanzi ziyafuneka. Ngendlela efanayo ukuba ukuzala kwenzeka kwezinye iintlobo, ngale ntlanzi inokwenzeka ngababini okanye ngamaqela apho Iintlanzi ezingamadoda zihamba phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Phantom Tetra emnyama